Video: Daw Aung San Suu Kyi's Birthday Message | Myanmar Celebrity Gossip & News
Video: Daw Aung San Suu Kyi's Birthday Message
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့မှာ အသက် (၆၆) ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မွေးနေ့ အမှာစကားVideo on Youtube!!!
Video From NLD Burma and DVB Television
For the first time in nearlyadecade, Myanmar's democracy icon Daw Aung San Suu Kyi celebrated her birthday in freedom on Sunday (19 June 2011).The Nobel Peace laureate turned 66, and received one gift at Yangon's international airport: the arrival of her youngest son, Kim Aris, who lives in Britain and kissed his mother on arrival. Suu Kyi has celebrated 15 birthdays in detention or house arrest over the past 22 years, and this was the first in nine years that she was able to mark freely with friends, family and supporters. Suu Kyi was born on June 19, 1945, in Yangon and she is the youngest daughter of Bogyoke Aung San, the founder of Burmese Tatmadaw. Suu Kyi won the 1991 Nobel Peace prize for her determined nonviolent struggle for democracy in Myanmar.
DreamCreatorJune 19, 2011 at 7:52 PMအမေ့ အတွေအခေါ် ရဲ့ တဝက်လောက် ကိုအခုနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်သူတွေမှာ ရှိရင် မြန်မာပြည်တိုးတက်ပြီ ...... လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်အမေ ..... အသက်ရှည်စွာ နိုင်ငံအတွက် တာဝန်တွေထမ်းဆောင် နိုင်ပါစေ ..ReplyDeletemgJune 20, 2011 at 1:33 AMအတွေးအခေါ်ဆိုတာဘာလဲ။ဘယ်လိုအရာမျိုးကို အတွေးအခေါ်လို့ သတ်မှတ်သလဲ။ReplyDeletenu aungJune 20, 2011 at 4:01 AMmg ဆိုတဲ့ကောင် မင်းကို အတွေးအခေါ် ဆိုတာ ဘာလဲ....?၇ှင်းပြ၇ဦးမှာလား....?စောက်၇ူး.............ReplyDeleteko moeJune 20, 2011 at 4:20 AMhote pa ko nu aung yal..ReplyDeletehaymamJune 20, 2011 at 5:13 AMအတွေးအခေါ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတောင်မသိတဲ့ ငမောင် ဥာဏ်မမှီရင် ဘာမှဝင်ပြောမနေနဲ့.... နင့်သခင်ကျွေးတာကို ၀အောင်စားပီးကောက်ရိုးပုံစောင့်ခွေးလိုလာဟောင်မနေနဲ့......နင်တို့လို ၃ယောက်ပေါင်း ဆယ်တန်းမအောင်တဲ့ဥာဏ်နဲ့ဘာမှဝင်ပြောမနေနဲ့...ReplyDeletemaJune 20, 2011 at 5:43 AM@ mgWhy your brain doesn't work?ReplyDeleteaung khant kyawJune 20, 2011 at 8:27 AMမင်းတို့ လိုအချင်းချင်းကိုက်နေတဲ့ လူ့ ငနွားတွေရှိနေသမျှတော့ မြန်မာပြည်တိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူး...ညီညွတ်မယ်မရှိဘူး အားရင်ကိုက်ဖို့ ဘဲစဉ်းစားနေကြတယ်...ReplyDeleteaung khant kyawJune 20, 2011 at 8:28 AMမြန်မာပြည်တိုးတက်ရေး ကို ဖော်ဆောင်ပေးနေကြတဲ့ သူတွေအကုန်လုံးကိုလေးစားပါတယ်ဗျာ...ReplyDeleteပိုးဟပ်ဖြူJune 20, 2011 at 1:45 PMဒီမိုတွေက တသတ်လုံး လူမွှေး လူယောင် ပြောင်မှာ မဟုတ်ပါဖူးကွာဒီလိုပါပဲ။ အော်ချင်တာ အော်ပါစေ။ReplyDeletefuck spdcJune 20, 2011 at 8:25 PMဟုတ်ပါတယ်ဒီမိုတွေကလူမွှေးသူမွှေးတသက်လုံးပြောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကျိုးမဖက်အများအကျိုးအတွက်ထမ်းရွက်ကိုယ့်အတ္တကိုနောက်မှာထားပြီးလုပ်ဆောင်နေကြလို့ပါ။ပိုးဟတ်ဖြူလို၊mgလို၊aung khant kyawလိုသခင်အားရအောင်ကိုက်ပြ၊သခင်ထိ သွား ကြည့်ဆိုတဲ့ခွေးမျိုးတွေနဲ့တော့ကွာတာပေါ့ReplyDeleteskykgmalayJune 20, 2011 at 10:09 PMdemocracy တသတ်လုံး လူမွှေး လူယောင်မပြောင်ဘူးလို့ဘယ်သူပြော.....? နင့်သခင်ကျွေးတာကို ၀အောင်စားပီးကောက်ရိုးပုံစောင့်ခွေးလိုလာဟောင်မနေနဲ့....နင့် တို လိုအချင်းချင်းကိုက်နေတဲ့ လူ့ ငနွားတွေရှိနေသမျှတော့ မြန်မာပြည်တိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူး....ReplyDeleteKo HeinJune 20, 2011 at 11:45 PMmg ဆိုတဲ့လူကရီရတယ်..။ မသိရင်ပဲ သူက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထက် ပိုပြီး အတွေးအခေါ်မြင့်မားနေသလိုလို IQ မြင့်သလိုလို ပိုပြီးဆရာကျသလိုလိုနဲ့။ ဒီမှာ ခင်ဗျားလိုစစ်တပ်ကထွက်လာတဲ့ ဦးနှောက်နဲ့များ Oxford ကျောင်းထွက်ကိုပြောရဲသေးတယ်။ ခင်ဗျားဘွဲ့လက်မှတ် ခင်ဗျားအတွေးအခေါ်မပြောနဲ့ ခင်ဗျားဆရာထင်နေတဲ့ ခင်ဗျားရဲ့စစ်တပ်ကလူကြီးတွေ နဲ့ပေါင်းတောင် မမှီဘူး။ReplyDeleteawngJune 21, 2011 at 6:20 AMအန်တီစုလို ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေခြင်းဟာ မြန်မာပြည်သားတွေအတွက် တကယ်ကို အားရှိပြီး ဂုဏ်ယူ စရာကောင်းပါတယ်... ငရွှေနဲ့ သူ့အပေါင်းအပါတွေကြောင့်တော့ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် မြန်မာလို့တောင် ကျယ်ကျယ်မပြောရဲပါဘူး... အန်တီစု နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက် ပြည်သူ့အတွက် အောင်မြင်ပါစေ.. ကျန်းမာပါစေ...ReplyDeletelatysuJune 21, 2011 at 7:00 AMအမေစု နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ တိုင်ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာနဲ့ အတူး အမေလျှောက်လိုက်တဲ့လမ်းတိုင် ပန်းခင်းတဲ့လမ်းဖြစ်ပါစေ..အမေပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေက တန်းဖိုးမဖြက်နိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေပါအမေ...ReplyDeletecareJune 21, 2011 at 10:10 PMဟေ့ကောင် စောက်ရှူးငမောင် ...မင်းကို ဒီဆိုက်မှာ လုံးဝ မတွေ့ ချင်ဘူး...ဂေါက်ကြောင် ငမောင်ReplyDeleteroseJuly 15, 2011 at 4:56 AMthe best way for u i pray democratic mother su.always i pray for u.may God bless u always.this u so best tried all people for myanmar.thamks u so much.ReplyDeletejanjanJuly 17, 2011 at 7:16 PMကျွန်တော်က မြန်မာတစ်ယောက်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ်နိုင်ငံကမှ အထင်သေးတာမလိုချင်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံကိုအထင်သေးတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို အထင်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ကိုလဲအထင်သေးတာပါပဲ။ အဲဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံတကာက အထင်ကြီးလေးစားလာပြီးတန်းတူရည်တူဆက်ဆံတာမျိုးကို မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း လိုချင်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဘယ်သူတွေလုပ်နိုင်သလဲ ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ အဲဒီကိတ်စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးချင်သူများရှိပါသလားခင်ဗျား။ReplyDeletemyanmar loveJuly 25, 2011 at 4:47 PMmg ကအရူးဘဲးထင်တယ်ReplyDeleteAdd commentLoad more...